Ingabe Kungokomthetho Ukulanda i-Bulli Bai Apk? [Iziphesheli zikaSulli] - I-Luso Gamer
Ingabe Kungokomthetho Ukulanda i-Bulli Bai Apk? [Amadili kaSulli]
Nakuba abasebenzisi be-smartphone sebevele bewazi ama-Sulli Deals. Uma kungenjalo ungakhathazeki ngoba lapha sizochaza imininingwane kafushane. Ngokufanayo nesivumelwano sangaphambilini, leli hlazo elisha lacasula abantu. Uma uzimisele ukuhlola nokuqonda lesi sigcawu esisha uwedwa faka i-Bulli Bai Apk.
Abantu bebehlela ukujabulela loNyaka Omusha ngenjabulo nenjabulo entsha. Nokho, abantu bacasuka lapho bezwa ngalesi sicelo esisha. Lokho kukhube wonke uhulumeni ngemuva kokuthola lezi zikhalo.
Kuze kube manje lezi zindaba zicuphe imibiko ye-inthanethi eyimpikiswano eyahlukene. Leso simangalo sokuxhumanisa uhulumeni nenkinga ebalulekile. Noma kunjalo, uhulumeni ubonakala ethatha izinyathelo eziqinile ngokumelene nohlelo lokusebenza. Ukuze uhlole izici zohlelo lokusebenza kafushane, landa i-Bulli Bai App kusuka lapha.
Yini i-Bulli Bai Apk
I-Bulli Bai Apk iyinkundla ehlobene nabantu abadala eku-inthanethi lapho kwalayishwa khona izithombe zabantu abadumile abahlukahlukene. Labo bahlanganisa Izintatheli, Izishoshovu Zezenhlalakahle, Abafundi nabanye abantu abahlobene. Ngisho nabasebenzisi bathi onjiniyela balayisha izithombe zendali.
Ngemva kokumba ujule nokuqoqa ulwazi emithonjeni ehlukene. Namuhla lapha siphumelele ekunikezeni ulwazi oluyiqiniso oluqoqiwe. Lokho kuzoholela abasebenzisi be-smartphone baqonde izindaba ezibalulekile ezihlobene nohlelo lokusebenza.
Ngaphezu kwalokho lapha sizoxoxa ngezinye zezinto ezibalulekile. Okwasakazeke ngokuphelele le ntukuthelo enkulu phakathi kwabantu ababangela ukulimala komuntu siqu. Yize singenaso isiqiniseko sokuthi uhulumeni waseNdiya uhlela ukwenzani kulokhu.
Kodwa-ke, ungqongqoshe we-IT nezinye izikhungo ezinomthwalo wemfanelo sebelusukumele lolu daba oluvuthayo. Izitatimende ezihlukene zikhishwe yizikhulu mayelana nokuvinjelwa kwabo bobabili u-Sulli Bai no-Bulli Bai. Ngemuva kokuthola le mpendulo enamandla ohlangothini lwabantu.
Ezinyangeni ezimbalwa ezedlule ingxabano efanayo yacasula abantu ngokudayisela abesifazane abangamaSulumane nezithombe zabo. Yize kunjalo uhulumeni uthi uzobhekana nalolu daba ngamandla futhi axazulule lesi senzo esiyihlazo kusenesikhathi. Ngemva kwezinyanga ezimbalwa, manje le nkinga entsha isilunguze ikhanda layo.
Lapho umqondo walolu hlelo lokusebenza olusha ufana ngokuphelele nenkundla yangaphambilini. Nakuba abathuthukisi bathengisa kuphela izithombe zabantu abadumile ezithengiswayo. Kodwa abasebenzisi bathi abesifazane abehlukene nabo babekwe ohlwini lwendali.
Ngemva kokuhlola imibiko efinyelelekayo kanye nombono ohlukile wochwepheshe. Inkundla ayisekeli inqubo yendali yezithombe zomuntu siqu ngaphandle kwemvume. Okuthathwa njengokungekho emthethweni futhi abantu bafuna ubulungiswa ngokushesha.
Ngokusho kwezikhulu, i-Bulli Bai App Github yethulwa okokuqala ngomhlaka-1 Januwari 2022. Obekubhekwa njengosuku olujabulisayo lukaNcibijane. Ekuqaleni, izikhulu azithandi ukuthatha noma yiziphi izinyathelo eziqinile ngokumelene nohlelo lokusebenza oluthile.
Kodwa uma inkinga ikhula, manje izikhungo ezinomthwalo wemfanelo zibonakala zizibophezela ekuxazululeni inkinga ethile. Ngakho-ke unentshisekelo yokweseka isimo esisemthethweni sezikhungo bese ugwema ukufaka i-Apk.
I-Sulli Deals App
Lolu hlelo lokusebenza lwe-android lukhishwe ngonyaka odlule luqondise abesifazane abangamaSulumane. Noma kunjalo, ochwepheshe bathi bathola inkundla ethile efana ne-Sulli App. Ekhishwe ngonyaka odlule futhi inesibopho sokulayisha izithombe zabesifazane abadumile abangamaSulumane.
Ukuma kwabaholi bezepolitiki
Umholi ophikisayo waseNdiya uRahul Gandi usidlulisele ngokuqinile lesi sitatimende sokunganaki kukahulumeni nokungabi nantshisekelo. Umholi we-NCP uNawab Malik ucasukile ukubona Abesifazane abangamaVocal Muslim bethengiswa endalini ku-inthanethi. Ucele ungqongqoshe wezasekhaya ukuthi athathe izinyathelo ezisheshayo.
Omunye umholi wezepolitiki odumile uMehbooba Mufti usola ngokusobala uhulumeni ngokunikeza isandla mahhala enkingeni ethile. Ngisho naye usola uhulumeni ngalo mkhuba wokuqothulwa kwabantu. Lo mholi uzigxekile izenzo ezifuze lezi zokubulawa kwabantu.
Isinyathelo Sikahulumeni Enkingeni
Ngemva kokuthola izikhalazo ezimbalwa mayelana ne-Bulli Bai Apk efanayo. Ungqongqoshe we-IT u-Ashwini Vaishnaw umemezela ukwazisa i-GitHub ngokususa okuqukethwe. I-GitHub isivele isithathile isinyathelo futhi yagwema ukuqondisa kabusha abasebenzisi kusukela kumkhiqizo.
Ngaphezu kwalokho, abantu abanolwazi oluncane bayanconywa ukuthi bagweme ukufaka amafayela ohlelo lokusebenza anjalo. I-CERT kanye neziphathimandla zamaphoyisa zixhumene futhi zishintshana ngolwazi. Ukuze ugweme ezinye izinkinga futhi ungavumeli eminye imizwa ibuhlungu.
Ingabe Kusemthethweni Ukufaka I-Apk
Ngemva kokwenza ucwaningo nokuhlola okuqukethwe ku-inthanethi okufinyelelekayo. Sithola kuphela i-Bulli Bai GitHub engekho emthethweni futhi sincoma ukuthi abanye abasebenzisi be-smartphone bagweme ukufaka uhlelo. Ukweseka ubufazi kanye nokuphepha kwabesifazane.
Ufunda izindatshana zebhulogi ezihlobene kakhulu mayelana nezihloko ezahlukahlukene sicela uchofoze izixhumanisi ezilandelayo. Okukhona Ama-Hacks aphezulu we-5 PUBG ESP futhi GameLoop Kuvinjelwe eNdiya.
Uma ukholelwa ukuthi amapulatifomu anjalo ayinkinga enkulu emphakathini wesintu. Ikakhulukazi kwabesifazane, labo abanenkinga yokuthola amalungelo abo amahle. Uma uzimisele ukuhlola izinkinga uwedwa bese ulanda i-Bulli Bai Apk ku-inthanethi.
Izigaba Blog Amathegi I-Bulli Bai Apk, I-Bulli Bai App, I-Bulli Bai App GitHub, Bulli Bai GitHub Imeyili kwemikhumbi
I-Minecraft ModCombo Apk Download Ye-Android [Umdlalo]